LA OGAADAY: Sababta Uu Luka Jovic Ku Diiday Barcelona Ee Uu Real Madrid Ku Doortay Oo La Ogaaday. - Gool24.Net
Real Madrid ayaa haddaba la sheegay in ay heshiis la sii gaadhay gool dhaliyaha kooxda Frankfurt iyo xulka Serbia ee Luka Jovic kaas oo markii hore diirada u saarnaa Barcelona.
Intii ayna Real Madrid soo galin tartanka xidiga kooxda Frankfurt ee Luka Jovic ayay Barcelona ahayd kooxda sida wayn loogu saadaalinayay in ay xidigan Camp Nou keenayso balse arinta ayaa si buuxda isku badashay.
Waxaa hadda la ogaaday sababihii ka danbeeyay sidii ay Real Madrid ku awooday in ay Barcelona kaga hor martay saxiixa Jovic kaas oo la filayo in uu ka mid noqon doono saxiixyada ay Madrid dhawaan ku dhawaaqi doonto.
War lagu shaaciyay Diario Gol oo dalka Spain laga leeyahay ayaa lagu sheegay in Lionel Messi uu sabab u noqday in Luka Jovic aanu Barcelona ku soo biirayn isla markaana uu Real Madrid doortay.
Luka Jovic ayaan doonayn in uu caawiye kaydka ku jira u noqdo Luis Suarez kaas oo haysta taageerada buuxda ee Lionel Messi, wuxuuna Jovic iska diiday in Suarez uu kaydka ugu jiro maadaama oo uu waliba Messi taageerayo in Suarez uu boos joogto ah helo.
Dhinaca kale waxaa warbixintan lagu sheegay in Real Madrid ay Luka Jovic u balan qaaday in uu fursad fiican heli doono isla markaana ay tahay in uu la tartamo Karim Benzema.
Ma aha gool dhaliyihii ugu horeeyay ee Barcelona u diiday sababta Lionel Messi balse waxaa jiray xiliyo badan oo ay Barcelona suuqa kala iibsiga ugu hungowday saamaynta Messi ee kooxda kowaad.
Barcelona ayaa doonaysay in Luka Jovic uu noqdo badalka waqtiga dheer ee Luis Suarez kaas oo galay qaybtii ugu danbaysay ee waayihiisa ciyaareed laakiin lama filayo in wali uu kaydka si buuxda u fadhiisan karo xili ciyaareedka soo socda.
Xidhiidhka fiican ee Lionel Messi iyo Luis Suarez kaga dhexeeya garoonka dhexdiisa iyo banaankiisa ayaa gool dhaliyaal badan oo ay Barcelona doonaysay sabab ugu noqday in ay iska diideen in ay Barca u saxiixan si ay saamaynta xidigahan uga dheeraadaan.
Laakiin Luka Jovic oo wacdaro ka soo dhigay horyaalka Jarmalka ayaa Camp Nou ka arki waayay fursadii uu horumarkiisa ku sii wadan lahaa waxayna taasi keenaysaa in uu Real Madrid ku biiri doono.